IVisa eya eSaudi Arabia | Susa futhi usebenze nabaphathi be-Saudi
I-Visa eningi laseSaudi Arabia
Uthole iSaudi Arabia!
Thola i-Visa Yezwe Lama-Arabhu!
IVisa eya eSaudi Arabia - Siyayithanda i-Middle East. Thola i-visa bese usebenza eSaudi Arabia. Dubai City Inkampani, gngokomqondo, manje inikezela inqubo yokufuduka yezinkampani zase-Saudi. Ngakho-ke, uma uzibuza ukuthi ikhona yini indlela yokuthola i umsebenzi we-visa + eSaudi Arabia. Sicela usebenzise izinsiza zethu zenkampani.
Inkampani yethu iyimpendulo kusesho lwakho lwe-inthanethi. Kukhokha isikhathi esisodwa kuphela ngaphandle ukukhokha ngiphinde. Inkampani Dubai iyindlela yokuthola i-visa yokuqashwa noma i-visa yebhizinisi noma ukuxhumana nabanye ngaphakathi kwezwe lama-Arabhu. Thola ithuba lempilo entsha nge-akhawunti ethuthukisiwe. Ukuqinisekiswa kwesinyathelo esisodwa esisheshayo futhi ungathola amathuba amabhizinisi amasha namathuba emisebenzi eMpumalanga Ephakathi.
Susa futhi usebenze nabaphathi baseSaudi
Qala nge-Disai City Company premium Visa Services eya eSaudi Arabia. Thola i-visa bese usebenza nemenenja ye-akhawunti yethu izokunikeza imininingwane efanele nethuba ukufunda kabanzi mayelana nokunikezwa kwemisebenzi eSaudi Arabia. Inkampani yethu yakha amathuba okuba khona kwama-expats aphesheya. Inhloso yethu enkulu ukusiza izisebenzi ezivela kuwo wonke umhlaba ukuthola i-visa nokusebenza eMiddle East.
Ngohlelo lwethu lwe-visa, ungathuthela ku inhlokodolobha yeSaudi Arabia futhi sisebenzisana kakhulu nabaphathi bamabhizinisi abahamba phambili emhlabeni. Ukusuka ezimakethe zezimali kuze kube sezitolo ezinhle kakhulu zokuthenga. Ngaphezu kwalokho lapho ungaxhumana ngqo nabasebenzi kanye nabaphathi be-HR ikakhulukazi abavela, e-United Arab Emirates, Qatar, Kuwait naseBahrain.
Inkampani yedolobha laseDubai iyithuluzi le-Visa elaziwa kakhulu nelifaneleka kakhulu eMiddle East. Manje ungathola ithuba lokusebenza futhi uhlale lapho. I-DCC ikunikeza ithuba lokuthi uthathe igxathu lokuqala ubheke kwelakho Uhambo lwase-Middle East!. Thola umsebenzi futhi usebenze ezweni elikhuluma isi-Arabhu.
Iqembu lethu libheke ukukusiza ekuqhubekeni nenqubo ye-Visa enzima kusuka ku-A uye ku-Z ngenqubo yokufuduka komndeni wakho iye eMiddle East. Njengoba ufika eRyjiah uzokwazi ukufuna umsebenzi. Cishe khona lapho. Ngaphezu kwalokho, inkampani yethu kuphela elawula inqubo ye-visa yokuhlala nabaphathi baseSaudi. Sisiza ngokubhuka ithikithi futhi sihlinzeka ngendawo yokuhlala lapho uqala khona impilo yakho entsha yamaphupho ama-Arabhu. Sinethemba lokuthi uzoba ngomunye wabaphaseli abajabule. Futhi uzobe usebenza ngaphakathi kwabaPhathi abahle kakhulu baseSaudi.
Iba ngowokuqala ukubuyekeza "i-Visa eya eSaudi Arabia" Khansela impendulo